Semalt: साना व्यवसायको लागि मालवेयर रोक्नको लागि बहुमूल्य तरिकाहरू
के तपाई सामाजिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ? यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने साना व्यवसाय समुदाय तपाईंको सहयोगको लागि रोइरहेको छ। किन? ठिक छ, Symantec द्वारा प्राप्त तथ्या .्क अनुसार, सबै साइबर आक्रमणको %०% 500०० भन्दा कम कर्मचारीको साथ फर्महरु विरुद्ध शुरू गरिएको थियो। मुद्दालाई अझ नराम्रो बनाउनका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा एलायन्सले पत्ता लगाएको छ कि हरेक small साना व्यवसायहरु मध्ये १ ले हरेक वर्ष साइबर खतराको सामना गर्नु पर्दछ। यस संख्या मध्ये, %०% रिकभरी हुँदैन। तिनीहरू प्राय: छ महिना पछि पसल बन्द गर्छन्। यसको कारण यो हो कि तपाईंले साना साइबर सुरक्षाको राज्यमा अपडेटहरूको लागि अनुरोध गरेको सानो व्यवसायहरू भेट्टाउनुभयो।
मालवेयरले कसरी तपाईंको व्यवसायलाई बाधा पुर्‍याउन सक्दछ भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्, त्यसपछि Semalt को ग्राहक सफलता प्रबन्धक, ओलिभर किंगले तोक्ने गाईड प्रयोग गर्नुहोस् , आफैंलाई (मालवेयर) बाट बचाउनको लागि।
वास्तवमा मालवेयर के हो र यसले कसरी व्यवसायलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ
मालवेयर मालिसियस सफ्टवेयरको लागि संक्षिप्त रूपमा हो। संयोगवश, उपसर्ग 'मल' को स्पेनिश र अन्य ल्याटिन भाषाहरूमा नकारात्मक अर्थ छ (यसको अर्थ खराब हो)। तपाइँलाई बुझ्न मद्दत गर्न यहाँ केहि परिभाषाहरू छन्।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो वास्तवमा खतरा होइन बरु सामान्य शब्द हो जुन कुनै सफ्टवेयरलाई सन्दर्भित गर्दछ जुन तपाईको प्राधिकरण बिना नै तपाईको प्रणालीमा आफैं स्थापना गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा यसको उद्देश्य डाटा फिश गर्नु हो जुन व्यक्तिगत विवरणहरू, क्रेडिट कार्ड नम्बर इत्यादि चोरी गर्न प्रयोग हुन्छ। भाइरस, ransomware, र स्पायवेयर सबै मालवेयर।
जसरी तपाईले जीवविज्ञानमा पढेका रोगीहरु, भाइरसहरु स्वयं नक्कल गर्न सक्छन् र अन्य डिस्क टुक्रा वा रेजिस्ट्री फाइलहरुमा फैलाउन सक्छ। भाइरस सामान्यतया अधिलेखन, मेट्न वा कम्प्युटर प्रणालीहरूको पुन: ढाँचा गर्न प्रोग्राम गरिएको हुन्छ।
नामले देखाउँदछ, स्पाइवेयर पठाइन्छ तपाइँको गतिविधिहरूमा जासूसी गर्न विशेष गरी ती अनलाइन गरेका। हामी तपाईंको सोशल मिडिया खाताहरू, ब्राउजर ईतिहास, र कुकीहरू बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन तपाईको गोपनीयतालाई भंग गर्ने इच्छा राख्ने पार्टीहरूलाई बेचिन्छ। चरम अवस्थाहरूमा, स्पाइवेयरले तपाइँको लगइन विवरणहरू र कुञ्जी लगि through मार्फत अन्य विवरणहरू चोरी गर्न सक्दछ
यो एक जटिल प्रोग्राम हो जुन ह्याकरहरू एक व्यवसाय बंधक बनाउन प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूले डाटाबेस वा सर्भरको नियन्त्रण लिन्छन् त्यसपछि भुक्तानीको माग गर्दछन् ताकि तिनीहरूले स्रोत जारी गर्न सक्दछन्। CryptoLocker ransomware को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण हो। २०१ 2013 मा यो निकालेको थियो।
मालवेयरबाट तपाईंको व्यवसायलाई जोगाउँदै
तपाईको व्यवसायलाई मालवेयरको खतराबाट बचाउन निम्न अवलोकन गर्नुहोस्:
१. तपाईका पीसीहरू एन्टिभाइरस अपडेट राख्नुहोस्। अवश्य पनि एन्टिभाइरस प्रोग्राम स्थापना गर्नु भनेको गर्नुपर्ने काम हो तर के विकासकर्ताले प्रोग्राम भर्खरको संस्करणको हो? के यो अपडेट गरिएको छ? के योमा एन्टि मालवेयर सुविधा छ?
२. एक वास्तविक अपरेटिंग प्रणाली, कानूनी कार्यक्रमहरू, र फर्मवेयर प्रयोग गर्नुहोस्। 'क्र्याक' अपरेटिंग सिस्टम, सफ्टवेयर र अनुप्रयोगहरू स्थापना गरेर कुनाहरू काट्नुहोस्। खरीद गर्नुहोस् वा वास्तविक सफ्टवेयरको सदस्यता लिनुहोस्। फायरवाल खुल्ला छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
Create. पासवर्ड नीति बनाउनुहोस् र लागू गर्नुहोस् - पासवर्ड प्रबन्धकहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा अल्फा अंकहरू र विशेष क्यारेक्टरहरू सहित हार्ड-टु-अनुमान पासवर्ड प्रयोग गरेर सुरू गर्नुहोस्।
Chan. अवसरहरू लिनुहोस् - सम्झौताबाट जोगिन, नेटवर्क परिवर्तन गर्नुहोस् जब कुनै कर्मचारी retrenched हुन्छ वा स्वेच्छाले छोड्दछ। यस तरिकाले एक असन्तुष्ट कर्मचारीले तपाईंलाई गडबड गर्न सक्दैन।
Your. तपाईका स्टाफलाई शिक्षित गर्नुहोस् - निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले शंकास्पद लिंकहरू वा संलग्नकहरू क्लिक वा स्थापना गरेनन्। एन्टिभाइरस कार्यक्रममार्फत सबै डाउनलोड गरिएका कार्यक्रमहरू चलाउन तिनीहरूलाई बनाउनुहोस्।